नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा, लक्षण र संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ त ? – Halkhabar kura
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार ११:२५
नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा, लक्षण र संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ त ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस विश्वभर तीव्र रुपमा फैलिएको छ । बरु चीनमा भने संक्रमणको दर घटेको छ । यो भाइरस हालसम्म ६० भन्दा बढी देशहरुमा फैलिसकेको छ । नेपालमा रसुवामा एकजना महिलामा कोरोना देखिएको थियो । उनी उपचारपछि घर फर्किएकी छिन् । तर नेपाल उच्च जोखिममा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भनेको छ ।
चीनसँगको सीमाना र चीनबाट दैनिक आउने हजारौं यात्रुहरुको कुनै चेकजाँच नगरी नेपाल प्रवेशले कोरोना नेपालमा फैलिन सक्दैन भन्न सकिन्न । कुनै दिन कोरोनाको महामारी नेपालमा फैलिन सक्छ ।
त्यसका लागि सावधानी भने अपनाउन जरुरी छ । जसका कारण यसको फैलने क्रम तीव्र नहोस् । विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इग्ल्याण्ड तथा नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) बाट प्राप्त सूचनाको आधारमा कोरोना भाइरसबाट बच्न निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ त ?
कोरोना भाइरस एक जनाबाट अर्कोमा कसरी सर्छ अहिलेसम्म पता लाग्न सकेको छैन । भनिन्छ, कोरोना भाइरसको मिल्दो जुल्दो भाइरस खोकी तथा रुघाका कारण आउने सिँगान र र्‍यालमा पाइन्छ ।
जसको कारण कोरोना फैलिन्छ । त्यसैले एनएजएसको सल्लाह दिएको छ, आफ्नो हात राम्ररी धुनु पर्दछ । खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा आफ्नो मुख हातले ढाक्नुपर्छ ।
यदि हात फोहोर भए रुमाल अथवा टिस्यु पेपरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस पार्सल, चिठ्ठी वा खानाको कारण फैलिन्छ भन्ने कुनै प्रमाण भेटिएको छैन् ।
कोरोना भाइरस जस्तो भाइरस शरीर भन्दा बाहिर धेरै समय जिउँदो रहन सक्दैन् ।
कति खतरा: बेलायतको चिफ मेडिकल अफिसर्सले सार्वजनिक खतराको स्तर थोरैबाट मध्यम गरिदिएको छ तर एनएचएसका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा जोखिम कम छ । हुन त यस्ता देशहरुपनि छन् जहाँ कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त व्यक्तिको सम्पर्कमा हुनेको संक्रमित हुने ज्यादै खतरा हुन्छ ।
यसैकारण बेलायतमा चीन, इटाली तथा इरानबाट फर्केका मानिसका लागि खाश सल्लाह जारी गरिएको छ । यदि तपाई यसबाट संक्रमित हुनुहुन्छ भने हल्का लक्षणहरु देखिन्छन् । तपाई यस संक्रमणबाट बाहिर निस्कनपनि सक्नुहुन्छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार बिरामीबाट हुने मृत्यु को दर कम छ । यो १/२ प्रतिशतको बीच छ । यो पनि पता लागेको छ, जसको मृत्यु भयो उनीहरु कि त बढी उमेरका थिए कि पहिलेबाटै बिमारी थिए । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि भाइरसको सुरुवाती स्तर तथा हल्काफुल्का लक्षणको अहिले गन्ती गरिएको छैन् । यसै कारण संक्रमिमतबाट आएको संख्या पुरै भरपर्ने खालको भने छैन् ।
लक्षण के के हुन् ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को लक्षणमा पहिला ज्वरो आउँछ । यसपछि सुख्खा खोकी लाग्छ र एकहप्तापछि श्वास फेर्न गार्हो हुन्छ । तर, यस लक्षणको मतलब यो होइन की तपाईलाई कोरोना भाइरस नै भएको छ । अन्य भाइरसका कारणपनि यस्ता लक्षण देखिन सक्छ ।
कोरोना भाइरसको गम्भीर लक्षणमा निमोनिया, श्वास लिन धेरै गार्हो, किड्नी फेल हुनु र मृत्यु नै हुन सक्छ । वृद्ध मानिस तथा जसमा पहिलाबाटै केही बिमारी छ जस्तो मधुमेह, मुटुको बिमारी लगायतलाई खतरा गम्भीर हुनपनि सक्छ ।
आफूलाई एक्लो राख्न सकिन्छ: यदि तपाई संक्रमित ठाउँबाट आउनुभएको छ या कुनै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कबाट आउनुभएको छ भने तपाइलाई एक्लै बस्दा राम्रो हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा यो तरिका अपनाउन सकिन्छ ।
घरमै बस्नुस, अफिस स्कुल तया सार्वजनिक ठाउँमा नजानोस, सार्वजनिक बस, ट्याम्पो या ट्याक्सीमा यात्रा नगर्ने
घरमा पाहुनाहरु नबोलाउने, घरका सामानहरु सकिन्छ भने अरुलाई नै मगाउने
यदि तपाई अन्य मानिसको साथ रहनुहुन्छ भने अझ सर्तकता अपनाउनुपर्छ । छुट्टै कोठामा बस्नुस र साझा भान्छाकोठा र ट्वाइलेटको लगातार सफा गरिराख्नुपर्छ । १४ दिनसम्म यस्तो गर्नुस जसका कारणस संक्रमण नहोस् ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पाए: अहिले कोरोना भाइरसको कुनै उपचार छैन् । तर यसमा बिमारीको लक्षण कम हुने औषधी दिन सकिन्छ । जब तपाई ठीक हुनुहुन्न तबसम्म तपाई अर्को व्यक्तिबाट अलग नै रहनुस्
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि भ्याक्सिनको पता लगाउने काम भइरहेको छ । आशा गरौं यो वर्षको अन्तिमसम्म मानिसमा यसको परीक्षण होस् । केही अस्पतालले एन्टी भाइरसको औषधीको परीक्षण गरिरहेका छन् । एजेन्सीमा आधारित
Previous विदेश नजान सरकारको आग्रह, संक्रमित देशबाट आउनेलाई ‘अनअराइभल भिसा’ नदिने
Next छुवाछूत अन्त्यका लागि प्रदेश स्तरबाटै अभियान सञ्चारल गर्ने योजना छ: मन्त्री गुरुङ
कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा यसरी हुँदैछ जनगणना, (भिडियोसहित))
२७ कार्तिक २०७८, शनिबार ०३:००